XLS နှင့် XLSX FORMAT နဲ့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ANALOG EXCEL - EXCEL ကို - 2019
XLS နှင့် XLSX format နဲ့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? analog Excel
Microsoft က Excel ကို၏ထင်ရသောတိုးမြှင့်လူကြိုက်များမှုရှိနေသော်လည်း, များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်နေဆဲနဲ့တူမေးခွန်းများမေး "သင် XLS နှင့် XLSX format ကိုဖွင့်လှစ်။ "
XLS - တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း format နဲ့ Excel, စားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ်, သူ့အမြင်သေချာပေါက်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဤအစီအစဉ် Ly ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့ပြုမှမည်ကဲ့သို့သင်ယူဖို့ - အောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
XLSX - ထို့အပြင် (2007 ကတည်းက Excel) Excel သစ်ဗားရှင်းမှတ်တမ်းတင်မယ့်စားပွဲဖြစ်ပါတယ်။ သင် Excel (ဥပမာ, 2003) ၏ဗားရှင်းအဟောင်းရှိပါက - ပြီးတော့သင်ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်, သင်သာမရရှိနိုင် XLS ဖြစ်လိမ့်မည်။ စကားမစပ်, XLSX format နဲ့, ငါ့အတှေ့အကွုံရှိလည်းဖိုင်တွေချုံ့သူတို့လျော့နည်းအာကာသကိုတက်ယူပါ။ ဒါကြောင့်သင်က Excel ၏ဗားရှင်းအသစ်မှ switched ကြနှင့်သင်စာရွက်စာတမ်းများအများကြီးရှိသည်ဆိုပါက - အရှင် hard drive ထဲမှာအများကြီးအာကာသကိုတက်လွတ်မြောက်စေဖို့, သူတို့ရဲ့ Re-ကယ်တင်သစ်ကိုအစီအစဉ်ကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဖွင့်ထားဖိုင်ကို format နဲ့ XLS နှင့် XLSX?
ဖြစ်ကောင်း, အကောင်းဆုံး option ကို Excel 2007 ခုနှစ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသော install လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်အဖြစ်ပထမဦးစွာနှစ်ဦးစလုံးကို formats ၏စာရွက်စာတမ်းများ (ဆို "kryakozabr" ဒီတော့ထွက်သည့်ဖော်မြူလာကိုဖတ်လျက်နှင့်မမပါဘဲ။ ) ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
2) ပွင့်လင်းရုံး (အစီအစဉ် Link ကို)
ဤသည်ကိုအလွယ်တကူ Microsoft Office ကိုအစားထိုးနိုင်သည့်အခမဲ့ရုံး suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံရိပ်မှာမြင်ကြသကဲ့သို့, ပထမဦးဆုံးကော်လံသုံးခုအခြေခံအစီအစဉ်များရှိပြီး:
- စာသားကိုစာရွက်စာတမ်း (သမ်မာကမျြး analogue);
- Spreadsheet (Excel ကိုညီမျှ);
- Presentation (Power Point Analog စ) ။
3) disc ကို-Yandex
အဆိုပါ XLS သို့မဟုတ် XLSX စာရွက်စာတမ်းကြည့်ရှုရန်သင်ဝန်ဆောင်မှု Yandex-ROM ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး select လုပ်ပြီးကြည့်ရှုရန်ကလစ်နှိပ်ပါရန်လုံလောက်ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ။
စာရွက်စာတမ်းအလွန်လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ်ဝန်ခံရပါမည်။ ရှုပ်ထွေးပြီးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စာရွက်စာတမ်းရှိလျှင်စကားမစပ်၎င်း၏ဒြပ်စင်အချို့ကိုမှားယွင်းတဲ့ဖတ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု, "ထွက်ရွှေ့။ " နိုငျ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်, စာရွက်စာတမ်းများအများစုပုံမှန်အားဖြင့်ဖတ်ပါ။ ငါကွန်ပျူတာ Excel သို့မဟုတ် Open Office ကိုမတပ်ဆင်ရသေးသည့်အခါသင်ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်။ XLSX Yandex-ROM ထဲမှာစာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့်။
ဗီဒီယို Watch: Innovation: Analog Clock in Excel Pie + Doughnut Chart (စက်တင်ဘာလ 2019).